Ukuxoshwa komqondisi wenkampani | Law & More BV
Blog » Ukuxoshwa komqondisi wenkampani
Ukuxoshwa komqondisi wenkampani
Kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umphathi wenkampani axoshwe. Indlela ukuxoshwa komqondisi yenzeka ngayo kuye ngesikhundla sakhe sezomthetho. Izinhlobo ezimbili zabaqondisi zingahlukaniswa enkampanini: Abaqondisi bezomthetho nabezeshumi.
A umqondisi wezomthetho unesikhundla esikhethekile senkampani ngaphakathi kwenkampani. Ngakolunye uhlangothi, ungumqondisi osemthethweni wale nkampani, oqokwe nguMhlangano Kazwelonke Wabahlanganyeli noma yiSupervisory Board ngokususelwa emthethweni noma ezinhlolweni zokuhlangana futhi ugunyaziwe ukuba amele inkampani. Ngakolunye uhlangothi uqokwa njengesisebenzi senkampani esekelwe kwinkontileka yokuqashwa. Umqondisi osemthethweni uqashwe yinkampani, kepha akayona isisebenzi esijwayelekile.
Ngokungafani nomqondisi osemthethweni, a umqondisi we-titular akayena umqondisi osemthethweni wale nkampani futhi ungumqondisi kuphela ngoba lelo yigama lesikhundla sakhe. Imvamisa umqondisi obizwa nge-titular ubizwa nangokuthi “umphathi” noma “iPhini likamongameli.” Umqondisi we-titular akaqokwa nguMkhandlu Kazwelonke Wabaninimasheya noma yi-Supervisory Board futhi akagunyaziwe ngokuzenzakalelayo ukumela inkampani. Angagunyazwa ngalokhu. Umqondisi we-titular uqokwa umqashi futhi ngenxa yalokho, ungumsebenzi “ojwayelekile” wale nkampani.
Okwe umqondisi wezomthetho ukuxoshwa ngokusemthethweni, bobabili ubudlelwano bakhe benkampani nobokuqashwa kumele bunqanyulwe.
Ukupheliswa kobudlelwano bebhizinisi, isinqumo esivumelekile esisemthethweni esisemthethweni soMhlangano Kazwelonke Wabahlanganyeli noma iBhodi Yokwengamela sanele. Ngemuva kwakho konke, ngenxa yomthetho, wonke umphathi ophethe umthetho angahlala amiswe futhi axoshwe yibhizinisi eligunyazwe ukuqokwa. Ngaphambi kokuxoshwa komqondisi, kumele kucelwe izeluleko kuMkhandlu Wezemisebenzi. Ngaphezu kwalokho, inkampani kumele ibe nesizathu esizwakalayo sokuxoshwa, njengesizathu sebhizinisi nezomnotho esenza ukuthi isikhundla singekho, ubudlelwano bokuphazamiseka obuphazamisekile nabaninimasheya noma ukungakwazi ukusebenza komqondisi. Ekugcineni, izidingo ezilandelwayo ezilandelayo kufanele zilandelwe uma kuxoshwa ngaphansi komthetho wenkampani: ingqungquthela evumelekile yoMhlangano Kazwelonke Wabahlanganyeli, ukuthi kungenzeka ukuthi umqondisi alalelwe nguMhlangano Jikelele Wabahlanganyeli futhi ululeke uMhlangano Jikelele Wabahlanganyeli mayelana isinqumo sokuxoshwa.
Ukuze kunqanyulwe ubudlelwano bokuqashwa, inkampani kufanele ibe nesizathu esizwakalayo sokuxoshwa futhi i-UWV noma inkantolo izonquma ukuthi ngabe kunaleso sizathu esifanelekile. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umqashi angayinqamula ngokusemthethweni inkontileka yokuqashwa nomsebenzi. Kodwa-ke, okuhlukile kule nqubo kusebenza kumqondisi osemthethweni. Yize kunesizathu esizwakalayo sokuxoshwa komqondisi osemthethweni, kepha ukuvivinywa kokuxoshwa akusebenzi. Ngakho-ke, indawo yokuqala emayelana nomqondisi osemthethweni yukuthi, empeleni, ukunqanyulwa kobudlelwano bakhe bebhizinisi nakho kuholela ekuphelisweni kobudlelwano bakhe bokuqashwa, ngaphandle kwalapho kusebenza ukwenqatshelwa kokukhanselwa noma ezinye izivumelwano.
Ngokungafani nomqondisi osemthethweni, a umqondisi we-titular isisebenzi kuphela. Lokhu kusho ukuthi imithetho yokuxoshwa 'ejwayelekile' isebenza kuye ngakho-ke uthola ukuvikelwa okungcono ngokuxoshwa kunokuba ngumqondisi osemthethweni. Izizathu zokuthi umqashi kufanele aqhubeke nokuxoshwa, esimweni somqondisi we-titular, zivivinywa kusengaphambili. Lapho inkampani ifuna ukuxosha umqondisi we-titular, kungenzeka lezi zimo ezilandelayo:
Ukuxoshwa yimvume yokuxoshwa kwa-UWV
Ukuxoshwa yinkantolo yesifunda esincane
Uma inkampani ingenasizathu esizwakalayo sokuxoshwa, umqondisi osemthethweni angafuna isinxephezelo esifanelekile, kepha, ngokungafani nomqondisi we-titular, angeke afune ukubuyiselwa kwenkontileka yakhe yokuqashwa. Ngaphezu kwalokho, njengomsebenzi ojwayelekile, umqondisi osemthethweni unelungelo lokuthola inkokhelo yezinguquko. Ngokubheka isikhundla sakhe esikhethekile futhi ngokungafani nesikhundla somqondisi we-titular, umqondisi osemthethweni angaphikisana nesinqumo sokuxoshwa ngazo zombili izizathu ezisemthethweni nezinamandla.
Izizathu ezibucayi zithinta ukucabanga kokuxoshwa. Umqondisi angaphikisana nokuthi isinqumo sokuxoshwa kumele sichithwe ngokwephula ukucabanga nobulungiswa ngokubheka lokho okubekwe ngokusemthethweni mayelana nokuqedwa kwenkontileka yokuqashwa nalokho amaqembu avumelene ngakho. Kodwa-ke, ukuphikisana okunjalo okuvela kumqondisi osemthethweni kuyaqabukela kuholele empumelelweni. Ukudluliswa kwesimilo esingenzeka sokuthathwa kwesinqumo sokuxoshwa kuvame ukuba nethuba elikhulu lokuphumelela kuye.
Izizathu ezihlelekile zithinta inqubo yokwenza izinqumo ngaphakathi koMhlangano Wabahlanganyeli Abajwayelekile. Uma kuvela ukuthi imithetho engahlelekile ayilandelwanga, iphutha elisemthethweni lingaholela ekususweni noma ekuchishisweni kwesinqumo soMhlangano Wabahlanganyeli Abajwayelekile. Ngenxa yalokhu, umqondisi osemthethweni kungenzeka abhekwe ukuthi akakaze axoshwe futhi inkampani ingahle ibhekane nesimangalo esikhulu seholo. Ukuvimbela lokhu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi izidingo ezihlelekile zesinqumo sokuxoshwa ziyahambisana.
At Law & More, siyaqonda ukuthi ukuxoshwa komqondisi kungaba nomthelela omkhulu enkampanini nakuyena umphathi uqobo. Yingakho sigcina indlela yomuntu siqu futhi esebenza kahle. Abameli bethu abangochwepheshe emkhakheni we-labour- kanye nomthetho webhizinisi futhi ngakho-ke bangakunikeza ukwesekwa okusemthethweni ngesikhathi sale nqubo. Ungakuthanda lokhu? Noma uneminye imibuzo? Bese uthintana Law & More.
Thumela Previous Amalungelo okushicilela kanye nokubonisa isithombe
Post Next Ukushintsha amagama wokuqala